नगर कर्मचारीको आन्दोलन जारी, जिविस कर्मचारीको एक्यबद्धता
प्रस, वीरगंज, १५ साउन/ वीरगंज उपमहानगरपालिका कर्मचारीहरूको आन्दोलन आज चौथो दिन पनि जारी रह्यो । स्थानीय निकाय कर्मचारी सङ्घ र नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएसनले संयुक्तरूपमा सञ्चालन गरेको आन्दोलन आज केही फरक ढ·ले सञ्चालन भयो । नगरपालिकाको एक्साभेटर, टयाक्टर र अन्य सवारी साधनहरूसमेत सहभागी गराइएको विरोध जुलुसले नगरको विभिन्न भागको परिक्रमा गरेको थियो । सवारी कर, पटके सवारी कर र पार्किङ शुल्क सम्बन्धी माग लिएर जारी नगर कर्मचारी आन्दोलनमा जिल्ला विकास समिति पर्साका कर्मचारीहरूले पनि एक्यबद्धता जनाएका छन् । एक्यबद्धता जनाउँदै जिविस कर्मचारीहरूले आज जिविस पर्साका सम्पूर्ण काम कारबाई ठप्प पारेका थिए । नगर कर्मचारीहरूको आन्दोलनका कारण नगर क्षेत्रको फोहर मैला आज पनि उठाइएन । पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भु कोइराला नियमित तीन दिने बिदा मनाउन आजै काठमाडौंतर्फ गएका छन् । आन्दोलित कर्मचारीहरूले भने प्रजिअले समस्या समाधान गर्न नचाहेको आरोप लगाएका छन् । नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएसनका वीरगंज एकाइका कावा अध्यक्ष किशोर सिंह राजपूत, स्थानीय निकाय कर्मचारी सङ्घका ए
तेस्रो लि·ीहरूमा एचआइभी एड्स र सङ्क्रमणको कारण
सुषमा शर्मा, वीरगंज/ “मलाई थाहा थियो बिना कन्डम यौन सम्पर्क राख्नुहुँदैन । रक्सौलमा कन्डम जहाँ पनि पाइँदैन, खोजें पनि, तर पाइनँ । अनि जे होला भनेर भारतीय पुरुषसँग यौन सम्पर्क राखें”– रौतहटकी हाल वीरगंज नगवा बस्ने २० वर्षीया रिता (नाम फेरिएको) ले बताइन् । रिता सहयात्री समाजकी एक सदस्य हुन् । रौतहटमा हुर्केकी उनी सामान्य लेखपढ गर्न जान्दछिन् । बितेको ४ वर्षदेखि वीरगंज नगवा बस्ने रितालाई विगत दुई वर्षदेखि एचआइभी लागेको छ । तेस्रो लि·ी रिता भन्छिन्– “म मेरो परिवारको ६ वटा दिदीहरू पछिको एउटा मात्र भाइ हुँ । तर म पनि बहिनी भएँ । उनी अगाडि भन्छिन्–“म सानैदेखि केटी जस्तै कार्य गर्थें, मलाई बुवाआमाले छोराको लोभले जन्माए तर म केटीको मानसिकता लिएर जन्में, विस्तारै–विस्तारै म केटीजस्तै कार्य गर्न थालें । मलाई केटाहरू एकदमै मन पर्ने, त्यसैले उनीहरूले मलाई यौन सम्पर्कको लागि बोलाउँदा म मख्ख परेर जान्थें । सानै उमेरदेखि म यौन सम्पर्क गर्थें । त्यसपछि वीरगंजमा सहयात्री समाजको आफिस खुल्यो अनि यहाँ आएँ– आफ्नो समाजमा बस्न” । सहयात्री समाज अहिले आफ्नै पहिचान बनाउँदै अगाडि बढेको छ । वीर
जिल्ला शिक्षा कार्यालय रौतहटमा माफिया ग्रुप हावी
प्रस, रौतहट, १५ साउन/ जिल्ला शिक्षा कार्यालय रौतहटमा व्यापक अनियमितता हुने गरेको समाचार प्राप्त भएको छ । रौतहटमा शिक्षा माफिया समूहले अनियमितता गर्ने र गराउने कार्य गर्दै आएको छ । पुराना जिल्ला शिक्षा अधिकारी सरुवा भएपछि फाँटका कर्मचारीलाई मिलाई जिशिअको नक्कली सही गरी माफिया समूहले काम गराउने गरेको हो । यस्ता अनियमितताले कार्य गर्न कठिनाइ भएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी दिलीपकुमार ठाकुर बताउँछन् । जिशिअ ठाकुरले माफिया समूहको पत्ता लगाई कार्यवाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कार्यालयको नक्कली लेटरपैड, छाप बनाई विद्यालयमा प्रधानाध्यापक छँदाछँदै अर्को व्यक्ति प्रधानाध्यापक बन्ने गरेको रौतहटका शिक्षा माफियाबाट नै सम्भव हुने गर्दछ । जिल्लान्तर सरुवा समेत नक्कली कागजातको भरमा हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक भए पनि सम्बन्धित कार्यालयबाट कार्यवाही हुन सकेको छैन । क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र शिक्षा विभाग एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको पत्रसमेत जिल्ला शिक्षा कार्यालय रौतहटका अधिकृतले लुकाइदिने गरेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान मात्र होइन पुनरावेदन अदालतको फैसलासमेत लुकाउने अधिक
रौतहटमा औषधि वितरण भएन
प्रस, रौतहट, १५ साउन/ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय रौतहटले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकामार्फत् वितरण गर्नुपर्ने औषधिहरू समयमा नदिएको कारण रोगीहरू मर्कामा परेका छन् । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई तालिम दिई औषधि दिनुपर्नेमा तालिम समेत समयमा नदिएकोले मर्का परेको हो । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट स्थानीय महिला स्वयंसेविकालाई अनिवार्य चौमासिक गोष्ठी, एकीकृत बालरोग सम्बन्धी दुई दिने तालिम दिनुपर्नेमा हालसम्म नपाएको स्वयंसेविकाहरूले गुनासो गरेका छन् । महिला स्वयंसेविकाहरूले २०६८/६९ सालको पहिलो चार महिनामा पाउनुपर्ने तालिम हालसम्म नपाएको महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका सङ्घ रौतहटकी अध्यक्ष बिन्दा न्यौपानेले बताएकी छन् । गाउँका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू मार्फत् वितरण गराउनुपर्ने जीवन जल, कोट्रोम बी नामक औषधि हालसम्म जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले उपलब्ध नगराएको कारण औषधि ग्रामीण भेगमा पुग्न सकेको छैन । तर उक्त औषधिको खरिद र बिल फछर्योट भइसकेको थाहा हुन आएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, रौतहटमा हुने गरेको अनियमितताबारे वार्ता कमिटी तथा छानबिन कमिटी गठन भई कामकाज अगा
काङ्ग्रेसको उद्धारको आधार र मधेस मुद्दा
- अधिवक्ता वीरेन्द्र प्रसाद यादव लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको लागि लोकतान्त्रिक शक्ति बलियो हुनै पर्छ । नेपालको २४० वर्षको इतिहासमा लगभग २३ वर्षजति लोकतान्त्रिक दलहरूले शासन गरेका छन् भने बाँकी सम्पूर्ण अवधि निरङ्कुश राजा र राणाहरूले शासन गरेका छन् । यसर्थ नेपाली समाजमा सामन्तवादको जरो बलियो हुनु स्वाभाविक हो । तर पनि लोकतान्त्रिक जनमानसको थोरै प्रयासबाट राजा तथा राणाजस्ता बलियो सामन्तवादी शासन जरैदेखि उखेलियो । तर सामन्तवादको जरो उखेलेर लोकतन्त्रको स्थापना जति सहज थियो, लोकतन्त्रको संरक्षण त्यतिकै जटिल बन्दै गएको छ । संविधानसभाजस्तो सार्वभौम सत्तासम्पन्न जनप्रतिनिधिमूलक निकायले स्थापना गरेको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता तथा सङ्घीयता जस्ता आम जनताको चाहनाको विषयमा पुन: जनमत सङ्ग्रह गर्ने वा पुनर्विचार गर्नेजस्ता लोकतान्त्रिक नेताहरूको धारणा लोकतन्त्र तथा जनादेश विपरीत मान्नुपर्छ । गणतन्त्रमा जाने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुनुमा नेपाली काङ्ग्रेसको योगदान अतुलनीय छ । यस पार्टीका नेताले यतिखेर गर्वका साथ यस उपलब्धिलाई संरक्षण गर्न लागिपर्नुपर्ने हो तर दु:खको विषय छ काङ्ग्रेसकै अधिकांश नेताले गणत
जुन आशा र अपेक्षाका साथ डा. बाबुराम भट्टराईको पदस्थापनको स्वागत जनमानसले गरेको थियो, त्यो एक–एक गरेर धराशायी भयो । डा. बाबुराम भट्टराईलाई नेपाली जनमानसले भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको दाँजोमा राखेका थिए । भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह अर्थमन्त्री छँदा उदार बजारीकरणको नीति ल्याएर थिल्थिलो भारतलाई ऊर्जा प्रदान गरेका थिए । र प्रकारान्तरमा प्रधानमन्त्री पनि बन्न सफल भए । डा. बाबुराम भट्टराई यद्यपि थोरै समयका लागि अर्थमन्त्री बनेका थिए, मनमोहन सिंहजस्तो मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र बुझ्न भ्याएका थिएनन्, तर पनि अल्पकालीन अर्थमन्त्रित्वकालमा उनले जुन आशा देखाएका थिए, त्यसबाट मानिस होनहार हो, देशले केही प्राप्त गर्छ भन्ने आशा पलाएको मात्र होइन, उनी प्रधानमन्त्री बनेपछि अर्थमन्त्री हुँदाको अधूरो काम र प्रधानमन्त्रीको दायित्वलाई राम्ररी निर्वाह गरेर देश र जनताको हित हुन्छ भन्ने विश्वासमा सबै ढुक्क थिए । व्यक्तिको रूपमा उनी स्वदेश र विदेश दुवैतिरबाट रुचाइएका र सक्षम नेताको रूपमा दरिएका थिए । तर नेपालको सत्तामा बस्नेलाई सतीको सराप परेको उखान डा. बाबुराम भट्टराईले पनि सही साबित गरे ।
चुलिंदै छ सवारी कर विवाद ,पत्रकार सम्मेलन र जुलुस प्रदर्शन
प्रस, वीरगंज, १४ साउन/ सवारी कर विवादबारे वीउमनपाका कार्यरत दुई कर्मचारी स·ठनले आज संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी प्रजिअको आदेशमा छलफल र स्थलगत निरीक्षण गर्ने काम भएको र उनैबाट पछि रोकिने काम गरिएको आरोप लगाएका छन् । कर्मचारी स·ठनले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मापदण्डले सो क्षेत्रमा कर उठाउन बन्देज छ भने सो कुरा लिखितरूपमा आए वैकल्पिक व्यवस्था तर्फ छलफल हुने र समस्याको समाधान गरिने बताएको छ । रु. ३ करोड २५ लाखमा यस वर्ष सवारी ठेक्का लागेपछि छैठौं दिन शड्ढराचार्य गेटमा सशस्त्र प्रहरीले रोक लगाएको थियो । त्यसपछि वीउमपाका कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका हुन् । कर्मचारीहरूले वारुण यन्त्र, स्वास्थ्य चौकीबाहेक नपा र वडाबाट प्रदान गरिने सरसफाइसमेत सम्पूर्ण सेवा ठप्प पारेका छन् । उनीहरूले आज नगरमा बृहत् र्‍याली पनि प्रदर्शन गरे । यता प्रजिअको कक्षमा आज बिहान बसेको बैठक निष्कर्षहीन भएको छ । विकल्प खोज्नेबारे बैठकमा छलफल भएको तर समस्याको समाधान भने हुन नसकेको कार्यकारी अधिकृत दिनेश घिमिरेले बताए । समस्या समाधान तर्फ पहल भने शुरु भएको उनले जानकारी गराएका छन् । प्रजिअ
क्रस्ड गिट्टी र डस्ट बोकेको ५ वटा टिपरलाई कारबाईपछि छोडियो
प्रस, निजगढ, १४ साउन/ क्रसर उद्योगबाट टिपरमा क्रस्ड गिट्टी र डस्ट लिएर वीरगन्जतर्फ जाँदै गरेको ५ वटा टिपरलाई नियन्त्रणमा लिई जरिवाना गरी आइतवार छोडेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराले सो टिपरलाई जीतपुर, परवानीपुर आसपासबाट नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धानका लागि जिल्ला वन कार्यालय बारामा शुक्रवार राति बुझाएको थियो । पछिल्लोपटक सर्वोच्च अदालतले अर्को आदेश नहुन्जेल रोडा, गिट्टी, ढु·ा, बालुवाको विदेश निकासी बन्द गर्न मुलुकभरका सम्बन्धित कार्यालयलाई आदेश दिएपछि गैरकानुनीरूपमा लगिरहेको गिट्टी, डस्ट लोड टिपरलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले जेठ २८ गते अर्को आदेश नहुन्जेल रोडा, गिट्टी, ढु·ा बालुवाको निकासी बन्द गर्न आदेश दिएको थियो । मकवानपुरबाट गिट्टी लोड गरेर जाँदै गरेको बा. २ ख ७२४० नम्बरको ट्रिपर अमलेखगन्जस्थित क्रसरबाट डस्ट लोड गरिएको ना. ३ ख ७४२६, ना.३ ख ९१७८, ना. ३ ख ८६९१, ना. ३ख ८२१९ नम्बरको ट्रिपर नियन्त्रणमा लिइएको थियो । मुलुकभित्र भन्दै सर्वोच्चको आदेशविपरीत रोडा, गिट्टी, ढु·ा वीरगन्ज आसपास सड्ढलन गर्दै अनुकूल मिलाई भारत निकासी गर्ने आशड्ढामा प्रहरीले नि
विद्यार्थीहरूका लागि समय व्यवस्थापन– १४
- अनन्तकुमार लाल दास समय निरन्तर बगिरहने धारा हो जसलाई बाँध बनाएर रोक्न सकिन्न । समयको सन्दर्भमा प्रकृतिको नियम अटल छ । हातबाट चिप्लेको समयलाई पुन: समात्न सकिन्न । तर ‘समय नै न भेटिने’ कुरा प्राय: प्रत्येक विद्यार्थीको मुखबाट सुन्ने गरिन्छ । कवि रहीमले भन्नुभएको छ, “समय लाभ सम लाभ नहिं, समय चूक सम चूक, चतुरन चित रहिमन लगी, समय चूक की हूक” अर्थात् समय लाभ र हानि दुवै हो । चलाख मानिसले समयबाट फाइदा लिन्छ तर जसले लिन सक्दैन उसको मनमा सधैंका लागि लाभ लिन नसकेको कुरा बिझीरहन्छ । हिन्दीमा एउटा अर्को उखान पनि छ “मन के हारे हार है, मन के जीते जीत ।” पछिल्लो आलेखमा मैले के भनेको थिएँ भने मनलाई व्यवस्थित गर्न सकियो भने समयलाई दोब्बर गर्न सकिन्छ । तर मन राउटे जस्तै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ र अर्को ठाउँबाट फेरि अर्को ठाउँ डुलिरहन्छ । यस कारण कसैले पनि के भन्न सक्दैन भने उसको मन सदैव एक स्थानमा स्थिर रहन्छ । तर पढाइमा एकाग्रता भने मनमाथि नियन्त्रण भए मात्र सम्भव हुन्छ । यहाँ म महाभारतको एक पात्र अर्जुनको एकाग्रताबारे चर्चा गर्न चाहन्छु । गुरुले लिइरहेको परीक्षाको बेला उनले चरालाई होइन, चराको आँ
विशिष्टलाई सुविधा र जागेको जनता
मुलुकका पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्री र पूर्व प्रधानन्यायधीशलगायत पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई सेवा सुविधा दिने भनी सरकारले गरेको निर्णय विवादमा परेको छ । मुलुकका मुख्य राजनीतिक दललगायत साना राजनीतिक दलहरूले समेत निर्णयको विरोध गरि सकेका छन् । नेपाल नागरिक समाजले उक्त सरकारी निर्णयविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन थालेको छ । पूर्ण विशिष्टहरूलाई सेवा सुविधा दिने निर्णयविरुद्ध नौ हजार ५ सयजना व्यक्ति र नेपाल पत्रकार महासङ्घलगायत विभिन्न ६२ वटा सङ्घ–संस्थाले एक्यबद्धता जनाएका छन् । मुलुक निर्माणको बेला अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने गरी सेवा सुविधा दिन नहुने राजनीतिक दलहरूको अडान छ । कतिपयले त डा. भट्टराईले आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन पूर्व विशिष्टहरूलाई रिझाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । अर्कोतर्फ भने हैसियत नै नभएको सरकारले दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय गर्न नहुने र भए पनि कार्यान्वयन नहुने बताइरहेका छन् । यस सरकारी निर्णयलगत्तै निर्णयबाट लाभान्वित हुने व्यक्तिहरूबाट नै आपत्ति आउनु र सुविधा लिन अस्वीकार गर्नु, सर्वोच्चमा यसविरुद्ध रिट पर्नु तथा विभिन्न सङ्घ–संस्था तथा नागरिक समाज नै उद्वेलित हुनुल
एनसेल महिला फूटबलको उपाधि सशस्त्रलाई
प्रस, पथलैया, १३ साउन/ विभागीय टिम एपीएफ क्लबले चौधौं राष्ट्रिय एनसेल महिला फूटबलको उपाधि जितेको छ । सिमरा र·शालामा शनिवार भएको फाइनल खेलमा सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)ले विभागीय प्रतिद्वन्द्वी नेपाल प्रहरीलाई २–१ ले पराजित गर्दै उपाधि जितेको हो । पाँचौंपटक उपाधि जिताउने क्रममा एपीएफकी कप्तान जमुना गुरुङ र अनु लामाले गोल गरेका थिए । नेपाल प्रहरीका लागि भने चन्द्रा भण्डारीले एक गोल गरिन् । एपीएफले यसअघि चारपटक राष्ट्रिय महिला फूटबलको उपाधि जितिसकेको छ । जीतसँगै एपीएफले नगद तीन लाखसहित ट्रफी प्राप्त गरेको छ । उपविजेता प्रहरीले भने एक लाख पचास हजारसहित ट्रफी पायो । विजयी टिमलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य–सचिव युवराज लामा र एन्फा अध्यक्ष गणेश थापाले ट्रफी तथा प्रमाणपत्र वितरण गरेका थिए । एपीएफकी अनु लामा प्रतियोगिताकै उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भइन् । प्रतियोगितामा ११ गोल गरेकी लामालाई एन्फाले पुरस्कारबापत स्कुटर दिएको छ । प्रतियोगिताकै उत्कृष्ट गोलरक्षक एपीएफकी चन्द्रादेवी दाहाल घोषित भइन् । त्यस्तै सजना राना उत्कृष्ट मिडफिल्डर र भगवती थापा उत्कृष्ट डिफेन्सबाट पुरस्कृत
राजपूत समाजको रक्तदान कार्यक्रममा ४८ जनाद्वारा रक्तदान
प्रस, वीरगंज, १३ साउन/ नेपाल राजपूत सेवा समाज पर्साद्वारा आज स्थानीय होटल कुमुमा आयोजित रक्तदान कार्यक्रममा ६ महिलासहित ४८ जनाले रक्तदान गरेका छन् । रक्तदान गर्ने महिलाहरूमा श्वेता चिपालु, नीतु सिंह, सुमन सिंह, नीलम सिंह, नीलु सिंह र विनीता सिंहले रक्तदान गरेका राजपूत सेवा समाज पर्साका सचिव सन्तोष सिंहले बताए । त्यस्तै सो कार्यक्रममा जीतेन्द्र, विवेक, माधव, नगनारायण, शड्ढर, निर्मल, राजु, नवीन, सञ्जय, अशोक, ब्रजेश, विशाल, रामप्रवेश, रामविनोद, अरबिन्द, दीपक, मनोज, सञ्जय, मुकेश, मनोज सिंह, अमित चौधरी, मनीष श्रेष्ठ, अजय पटेल, सुरेन्द्र कुँवर, सञ्जय झा, रामबाबू चौधरी, अमरिश सापकोटा, विनय अधिकारी, सन्दीप श्रीवास्तव, विष्णु मल्ल, रुपेश ठाकुरलगायतले रक्तदान गरेका थिए । राजपूत सेवा समाज पर्साका अध्यक्ष प्रद्युम्नप्रसाद सिंहको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न रक्तदान कार्यक्रममा ब्लड डोनर्स एसोसिएसन पर्साका अध्यक्ष शत्रुघ्न नेपाल, सचिव सरोज खड्का, सदस्यहरू अरबिन्द सिंह, मनोज शाह, अजय कुशवाहा एवं नेपाल रेडक्रस सोसाइटी पर्साका सदस्य दयाशड्ढर सिंहलगायतको सहभागिता थियो ।
रक्षाबन्धन प्रेमको प्रतीक पर्व
- उमाशड्ढर द्विवेदी रखिया बन्हाल भइया सावन आइल...रक्षाबन्धनको अवसरमा भोजपुरीभाषी क्षेत्रमा दिदीबहिनीहरूले गाउने गीत हो यो । साउनको शुक्लपक्ष पूर्णिमाको दिन रक्षाबन्धन पर्व मनाइन्छ । जसमा दिदीबहिनीहरूले आफ्ना दाइभाइहरूलाई आफ्नो इज्जत, मान, मर्यादा र सम्मानको रक्षा गर्ने कुराको सम्झना गराउने प्रतीकको रूपमा काँचो धागोको रक्षासूत्र बाँध्ने चलन परापूर्वकालदेखि परम्पराको रूपमा चलिआएको देखिन्छ । साउनको महिनामा विवाहिता वा कुमारी केटीहरूको मन प्राणमा यस अवसरको सुदीर्घ प्रतिक्षा रहेको हुन्छ । उनीहरूको मनमा सावन कहिले आउने, अझ पूर्णिमा कहिले आउने भन्ने कौतुहलता उत्पन्न भएको हुन्छ । तिनीहरूले औंलामा दिन गनेर समय बिताइरहेका हुन्छन् । हुनत व्रत पर्व नागपञ्चमीदेखि नै शुरु भइसकेको हुन्छ । नागपञ्चमीपछि साउन शुक्ल सप्तमी वा नवमीको दिन कुलदेवताको वार्षिक पूजाअर्चना हुन्छ । साउन शुक्ल नवमी कै दिन ‘बेलपानी’ भन्ने पर्व महिलाहरूले मनाउने गर्दछन् । यस पर्वको अवसरमा विवाहिता र कुमारी केटीहरू चाहे ती छोरी वा बुहारी नै किन नहोऊन् राति खाना खाइवरी हातमा मेहँदी सजाएर लगाउने गर्दछन् । यस दिन गाई, भैंसी तथा बाख्
वीउमनपाका कर्मचारी आन्दोलित, वारुणयन्त्र, स्वास्थ्यचौकीबाहेक सम्पूर्ण सेवा अवरुद्ध
प्रस, वीरगंज, १२ साउन/ सवारीकर सड्ढलनमा सशस्त्र प्रहरीले अवरोध सृजना गरेको विरोधमा आजदेखि वीरगंज उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन् । हिजो पर्सा प्रजिअमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाएको नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एशोसिएसन र स्थानीय निकाय कर्मचारी सङ्घले दिएको २४ घण्टे अल्टिमेटममा कुनै सुनवाइ नभएपछि आज दिउँसो १ बजेदेखि आन्दोलनमा उत्रेको कर्मचारीहरूले जानकारी गराएका हुन् । आज दिउँसो १२ बजेसम्म निर्णय कुरेर बसेको तर कुनै किसिमको पहल नभएपछि आन्दोलनमा ओर्लनुपरेको दुवै कर्मचारी युनियनका नेताहरूले बताए । घोषित आन्दोलनअनुसार आजदेखि वारुणयन्त्र र स्वास्थ्य शिविरबाहेक वीउमनपाबाट प्रवाहित हुने सबैखाले सेवा सुविधा अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको छ । सेवा ठप्प पारिएपछि नगर र वडाको सफाइ पनि प्रभावित भएको छ । वीउमनपाकाले आव ०६९/०७० को सवारी कर सड्ढलनका लागि स्थानीय प्रहरी प्रशासनको राय सुझाव अनुसार नै कर सड्ढलन केन्द्र निर्धारण गरेर ठेक्का लगाएको वीउमनपाका कार्यकारी अधिकृत दिनेश घिमिरे बताउँछन् । तर सशस्त्र प्रहरीले एक्कासि साउन ६ गतेदेखि शड्ढराचार्य गेटमा कर सड्ढलन रोक
पुरानो निर्माणको नयाँ मूल्याड्ढन गरी रकम भुक्तान, जिविस बाराले छानबिन शुरु गर्‍यो
उपेन्द्र यादव, बारा, १२ साउन/ बारा जिल्लाको दोहोरी गाविसको पुरानो विकास निर्माण कार्यको नयाँ मूल्याड्ढन गराई गाविस सचिव र जिविस इन्जिनियरको मिलोमतोमा रकम अनियमितता गरिएको उजुरी परेको छ । दोहरी गाविस सचिव जयकिशोर मल्लिक र जिविस बाराका इन्जिनियर महेन्द्र महतोको मिलोमतोमा विकास बजेट अनियमितता गरिएको आरोप लगाउँदै जिविसमा उजुरी परेको छ । दोहोरी गाविसको वडा नं. ३, ५, ६, ७ र ८ वडामा पर्ने बाटो मरम्मतका लागि गाविसबाट ४० हजार रकम छुट्याइएकोमा रु. २ लाख २५ हजारको काम भएको मूल्याड्ढन देखाई उपभोक्ता समितिलाई रु. १ लाख ८५ हजार थप रकम भुक्तानी गरेको स्थानीय उपभोक्ताहरूको आरोप छ । स्थानीय अंसारूल हक अंसारीको नेतृत्वमा रहेको उपभोक्ता टोलीले बढी रकम १ लाख ८५ हजार तुरुन्त गाविस कोषमा फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले पुरानो कामलाई नयाँ काम भनी गाविस सचिव र जिविसका प्राविधिकले गलत तथा नक्कली मूल्याड्ढन गरेर गाविसको बजेटमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका छन् । जिल्ला विकास समिति, बारामा परेको उजुरी सम्वन्धमा अनुसन्धान भइरहेको जिविस बाराले जनाएको छ । आरोपित गाविस सचि
पुलिस र सशस्त्र उपाधिका लागि आज भिड्ने
प्रस, पथलैया, १२ साउन/ सशस्त्र प्रहरीको एपिएफ क्लब र नेपाल पुलिस क्लब चौधौ राष्ट्रिय एनसेल महिला फूटबलको उपाधिका लागि शनिवार प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । सिमरा र·शालामा अपराह्न तीन बजे दुई विभागीय टिमबीच प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो । राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगितामा दुई टिमबीच दोस्रोपटक भेट हुन लागेको हो । यसअघि नवलपरासीमा सम्पन्न राष्ट्रिय महिला फूटबलको तेर्‍हौ संस्करणमा पनि यी दुई टिम फाइनलमा पुगेका थिए । तेर्‍हौं संस्करणमा एपिएफले पुलिसलाई १–० ले पराजित गरेको थियो । चारपटक लगातार राष्ट्रिय महिला फूटबलको उपाधि जितिसकेको एपिएफले यस संस्करणको विजेता पनि आफ्नो टिम बन्ने दाबी गरेको छ । एपिएफका प्रशिक्षक मिलन राईले पुलिसलाई फाइनलमा दोस्रोपटक हराउँदै पाँचौंपटक उपाधि जित्ने बताए । एपिएफ क्लबमा १३ खेलाडी राष्ट्रिय टिमका छन् । पुलिसमा भने राष्ट्रिय टिमका तीन खेलाडी मात्र छन् । एपिएफले चन्द्रनिगाहपुरमा धनुषा, झापा र कलैलीमाथि जित हात पारेको थियो । पुलिसले पनि सिमरा र·शालामा धनकुटा, बारा र आर्मीलाई पराजित गरेको थियो । पुलिसका प्रशिक्षक सन्देश श्रेष्ठले भने फाइनलमा एपिएफलाई पराज
- उमाशड्ढर द्विवेदी कुनै नगरमा सोमिलक नाम गरेको एउटा जुलाहा बस्दथियो । ऊ अनेक प्रकारका र· तथा चित्रकारीयुक्त रेशमी वस्त्र बनाउन निपुण थियो । उसले तयार पारेको रेशमी वस्त्र राजा– महाराजा तथा ठूला–ठूला साहू महाजनहरूले किन्ने गर्दथे तर जति राम्रो र· डिजाइनको वस्त्र तयार गरेर बेच्दा पनि बिहान–बेलुकाको छाक टार्ने तथा मोटो खस्रो लाउनेभन्दा बढी धन कमाउन सक्दैनथ्यो । यसविपरीत अन्य साधारण जुलाहाहरूले मोटो–खस्रो वस्त्र बनाएर पनि मनग्य धन कमाउँथे । उनीहरूको समृद्धि तथा आफ्नो विपन्नता देखेर खिन्न भई एक दिन उसले आफ्रनी स्त्रीसित भन्यो–प्रिये, हेर यी मोटो–खस्रो वस्त्र बनाउने कालिगढहरूलाई । राम्रो वस्त्र बनाउन न जानेको भए पनि यिनीहरू कति समृद्ध छन्, म भने सिपालू भएर पनि कति विपन्न छु । यो स्थान मजस्तो गुणी कालिगढको लागि बस्ने खालको छैन । अत: धन कमाउनका लागि म अन्यत्र जान चाहन्छु । उसकी स्त्रीले भनी–प्रियतम, विदेश जाँदैमा धन प्राप्त हुन्छ तथा आफ्नो स्थानमा धन प्राप्त हुँदैन भन्ने कुरा फजुल हो । अत: मेरो इच्छा छ तपाईं यहीं बसेर कुनै राम्रो उद्योग गर्नुहोस् । भाग्यमा रहेको धन आफ् से आफ् आउँछ । स्त्रीको
- शीतल गिरी पर–पुरुष, पराई, अथवा नातागोता भन्दा एकदम फरकको कुनै पुरुष । यस्ता मानिससँग भेट हुनु, केही कुराकानी हुनु प्रत्येक नारीको लागि सामान्य कुरो बनिसकेको छ । पुरुषप्रधान समाजमा नारीले अन्य पुरुषसँग कुनै वास्तै नगरोस् आज यो हुनै सक्दैन । आज मर्यादाको तन्तु कमजोर बन्दै गइरहेको छ । सम्पूर्ण संस्कृति छिन्न–भिन्न हुँदैछ । भन्नुस् किन ? घरमा, बजारमा, कार्यालयमा, बसमा अन्य पुरुषहरूसँग भेटघाट हुनु स्वाभाविकै हो । त्यो युग त अहिले छैन, नारीलाई रनिवासमा थुनेर राखियोस् । नारीले युग अनुसार आफ्नो प्रतिभा र महत्त्व बुझेर घरबाट बाहिर पाइला राख्न सक्ने क्षमतावान बनेका छन् भने अवश्य नै पर–पुरुषसँग भेटघाट भइहाल्छ । ती नारी धेरै गम्भीर र समर्थ बन्दछन् । आफ्नो प्रतिभा र महत्त्व नबुझ्ने नारी असमर्थ हुन्छन् अथवा बन्दछन् । असमर्थको आशय हो परनिर्भर बन्नू । ऊ घर परिवार चलाउँदैन, मानौं जीवन गुजार्न मात्र चाहन्छ । सुखमा पनि, दु:खमा पनि । उसको आफ्नै अलग सोच हुँदैन, गतिलो सोच, जसले गर्दा घरको स्थितिमा सुधार आओस् । हाम्रो देशको सामाजिक बनोट अनुसार पुरुष चाहे पति–मित्र होस्, छिमेकी होस् या सहकर्म
नारायणहिटी राजदरबारभित्र एक घण्टा
- सञ्जय साह ‘मित्र’ नेपालको राजधानी शहर काठमाडौं आवतजावत गर्न थालेको दुई दशक पुग्न थालेको छ । कामविशेषले पछिल्लो समयमा काठमाडौंको यात्रा पनि बाक्लिएको छ तर उपत्यकाभित्र मैले हेर्नुपर्ने धेरै कुराहरू बाँकी नै रहेका छन् । मैले हेर्न नभ्याएका मुख्य स्थानहरूमा नारायणहिटी राजदरबार पनि रहेकोमा यसपटकको यात्रापछि हेनुपर्नेको सूचीबाट यसको नाम हटेको छ । राजन वीरेन्द्रप्रतिको आस्था र श्रद्धा रहेको अवस्थामा नै दरबारको दर्शन कैयौंपटक सडकबाट गरेर त्यसभित्रको भव्यताको कल्पना गरेको थिएँ र त्यस भव्यताभित्र राजाको जीवन र दैनिकीको अनुमान पनि गर्ने गरेको थिएँ । देशमा गणतन्त्र घोषणा भइसकेर नारायणहिटी राजदरबार नारायणहिटी सङ्ग्रहालयमा परिणत भइसकेको एक वर्षभन्दा बढी बितिसक्दा र सर्वसाधारण नागरिकका लागि केही शुल्क लिएर अवलोकन गर्न पाउने गरी निर्णय सार्वजनिक भएको निकै महिना बितिसकेको छ । महिनामा तीन पटकसम्म काठमाडौं जान परिरहेको भए पनि २०६९ असार तेइस गते शनिवारमात्र नारायणहिटी राजदरबार भनी मेरो मानसपटलमा परिसकेको नेपालको एउटा दर्शनीय परिसरभित्र पसेर राज्यले सर्वसाधारणलाई हेर्न भनी खुला गरेको अधिकारको प्रयोग ग
लेखनमा मधेसको सम्भावना
- चन्द्रकिशोर मधेस र मधेसीलाई केन्द्रीय तत्त्व मानेर पुस्तक लेखनको काम अत्यन्त अल्प भएको छ । यसमा दुईटा धार छन् । एउटा राजनैतिक उद्देश्यका साथ नियोजित पुस्तक लेखनको काम, दोस्रो सोधकर्मीका रूपमा पुस्तकको प्रस्तुति । सोधकर्मीका रूपमा पुस्तकहरू स्वदेशी र विदेशी दुवैथरीबाट आएका छन् । जुन समाजबारे जति बढी लेखिएको छ, शोध भएको छ, त्यो समाजलाई अगाडि ल्याउन लेखकहरूको योग्दानको ठूलो हिस्सा हुन्छ । जातीय, भाषिक तथा क्षेत्रगत समुदायबाट राज्यप्रदत्त विभेदविरुद्ध र राज्ययन्त्रमा न्यायपूर्ण सहभागिताका लागि आवाज उठाएको नेपालकै पहिलो क्षेत्र मधेस हो तर मधेसी विद्रोहले पारेको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक असरहरूबारे बहुकोणीय अध्ययनका साथ प्राज्ञिक पुस्तक आएको छैन । मधेस केन्द्रित प्राज्ञिक तहमा शोधहरूको अत्यन्त खाँचो छ । भन्ने हो भने मधेस शोधार्थीहरूका लागि उर्वर मैदान रहेको छ । फ्रेडरिक गेजले चार दशक पहिले लेखेका ‘रिजनलिज्म एन्ड नेशनल युनिटी इन नेपाल’ विदेशीहरूले लेखेको तराई केन्द्रित कोसेढु·ा पुस्तक मानिन्छ, तर मधेसी विद्रोहपछि नेपालमा त्यसको पुनप्र्रकाशन गरिंदा त्यो पुस्तक खासै बिक्री भएन । त्यस्तै सोस
उच्च रक्तचापका कारण र बच्ने उपायहरू
– डा. रवीन्द्रकुमार ठाकुर विश्वभरि करिब २६ प्रतिशत मान्छे उच्च रक्तचापको समस्याले पीडित छन् । प्रत्येक वर्ष मई १७ को दिन उच्च रक्तचाप दिवस मनाइन्छ । यो समस्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ र जनस्वास्थ्य समस्याको रूपमा देखा पर्न थालेको छ । हाम्रो देशमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य चेतनाको अभावमा उच्च रक्तचापले शरीरमा नकारात्मक प्रभाव पर्न थालेपछि मात्र समस्याको रूपमा लिने गरिन्छ । उच्च रक्तचाप विश्वव्यापी समस्या हो र यसलाई समयमा नै नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । नत्र बिरामीको ज्यानसमेत जान सक्छ । रक्तनलीमा बग्ने रगतको तेर्सो दबाब नै रक्तचाप हो । रक्तचाप एउटा साधारण खाले यन्त्र जसलाई हामी एसफैगिनोमिटर भन्दछौं, त्यसको मदतले नापिन्छ । सामान्य तथा एउटा स्वस्थ मान्छेको रक्तचाप माथि ११० देखि १४० सम्म र तल ६० देखि ९० सम्म हुने गर्दछ र यसलाई एमएम अफ एचजीमा नापिन्छ । माथिल्लो रक्तचापलाई हामी सिसटोलिक रक्तचाप भन्दछौं र तल्लो रक्तचापलाई डायसटोलिक रक्तचाप भनिन्छ । सिसटोलिकको बेलामा मुटु खुम्चिने र डायसटोलिकको बेलामा मुटु आराम गर्ने गर्दछ । उच्च रक्तचाप भन्नाले सिसटोलिक रक्तचाप १४० एमएम अफ एचजीभन्दा माथि र डा
शिक्षकको नियति– न एकादशीको व्रत, न पेटभरि भात
- बैद्यनाथ ठाकुर शिक्षक, जसलाई प्राचीनकालदेखि गुरु भन्दै सम्मान गर्दै आइयो, यतिखेर बडो जटिल र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा आइपुगेको छ । प्रकृतिमा प्रत्येक कुराको विकास हुनु र विकासकै लागि यथास्थितिको पतन हुनु प्रकृति विकासको नियममा आधारित हुन्छ । कुनै बेला शिक्षकलाई गुरु भनेर सम्मान गर्ने प्रचलन कस्तो थियो भने गुरुको खुट्टामैं लम्पसार परेर साष्टा· दण्डवत गरिन्थ्यो । अझै गुरु पूर्णिमाको दिन त गुरुको खुट्टा धोई–पखाली गरेको पानी चरणमृत भनी पान गर्ने गरिन्थ्यो । त्यतिबेला गुरुहरू खडाउँ (काठको चप्पल) लगाउने गर्थे र समाजमा गुरुभन्दा जान्ने अरू कोही हुँदैनथ्यो । गुरुहरूको सम्मान यसकारण पनि हुन्थ्यो कि उनीहरू ज्ञानका भण्डार मात्र थिएनन्, सच्चरित्र, इमानदार, मेहनती तथा झूटो नबोल्ने, चरित्रवान हुन्थे । तर यतिखेर जमाना बदलिसकेको छ । शिक्षक मात्र समाजमा जान्ने व्यक्ति रहेन । आजभोलि शिक्षकभन्दा बढी कुराहरू रेडियो, टिभी, पत्रपत्रिका, इन्टरनेटलगायत विज्ञान र प्रविधिका साधनबाट प्राप्त हुन थालेपछि शिक्षकहरूको पहिलेभन्दा वजन घट्नु स्वाभाविक नै हो । त्यसैगरी बदलिंदो परिस्थिति, देशको राजनीतिक अवस्था तथा सामाज
सवारी कर विवाद किन ?
वीरगंजमा अहिले सवारी कर विवाद चर्केको छ । वीरगंज उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक करमध्ये सबैभन्दा धेरै राजस्व उठ्ने भएकोले बर्सेनि यसमा वृद्धि हुँदै जाओस् भन्ने नगरपालिकाको चेष्टा रहेको छ भने अधिकतम मूल्यमा डाँक सकारेको व्यक्तिले जथाभावी कर असुलेर आफ्नो लगानी उठाउने र लाभ प्राप्त गर्ने ध्येय राखेको हुन्छ । यी दुवै चेष्टाबीच देशको कानुन, शहरको आग्रह र जनजीवनमा के अनुकूलता वा प्रतिकूलता आउँछ भन्ने कुरालाई मध्यनजर राखेर नगरपालिकाको राजस्व पनि बढोस् र अन्य क्षेत्रमा पनि व्यवधान उत्पन्न नहोस् भनी विचार पुर्‍याउनुपर्छ । यिनै कुराहरूमा विचार पुर्‍याउन नसक्दा वीरगंजमा सवारी करको विषयलाई लिएर नागरिकले सास्ती सहनुपर्ने अवस्था आउने भएको छ । ठेकेदारले सवारी कर असुल्न अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका शड्ढराचार्य गेटमा अड्डा बसाल्दा मूल नाका अवरोध हुने र अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्गमा त्यसरी अवरोध हुनु नहुने प्रहरीको अडान छ भने प्रहरीको अडानबाट ठेकेदारले सवारी कर सड्ढलन कार्य रोकी वीउमपनालाई कर नबुझाउने भनेपछि नगरपालिका कर्मचारी आन्दोलित भएर सवारी कर उठाउन न दिने हो भने वारुणयन्त्रबाहेक नगरपालिकाले सार्वजनिक हितम
देश मुठभेडमा गए प्रधामन्त्रीले जिम्मेवारी लिनुपर्छ : नेता नेपाल
प्रस, पथलैया/निजगढ, ११ साउन/ नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले तत्काल राजीनामा दिएर राजनीतिक निकास नदिए देश गम्भीर मुठभेडमा जान सक्ने बताएका छन् । गृह जिल्ला रौतहटमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुन जाने क्रममा बिहीवार बिहान सिमरा विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले माओवादी आफ्नो अडानमा रहेर प्रधानमन्त्री भट्टराईले राजीनामा नदिने हो भने देशमा मुठभेडको स्थिति निम्तिन सक्ने बताए । उनले देश मुडभेडमा गए यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने बताए ।
सवारी कर विवाद बल्झिंदै गएको छ, ढाट राख्ने पक्षमा नगरपालिका कर्मचारी आन्दोलित
प्रस, वीरगंज, ११ साउन/ नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएसन वीउमनपा एकाइ र स्थानीय निकाय कर्मचारी सङ्घ नेपाल वीरगंजले आज संयुक्तरूपमा प्रजिअमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाउँदै सवारीकर सम्बन्धमा चौबीस घण्टाभित्र निर्णय नगरिए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् । वीरगंज भन्सार कार्यालयमा खटेका सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षकको निर्देशनमा साउन ६ गतेदेखि शड्ढराचार्य गेटमा वीउमनपाको सवारी कर रोक्का गरेकोमा आम्दानीको ठूलो स्रोत गुम्ने भन्दै कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । साउन १ गतेदेखि लगाइएको सो कर ५ गतेसम्म बिना अवरोध सड्ढलन भइरहेकोमा त्यसउप्रान्त सप्रनाउको निर्देशनमा रोक्का गरिएकोमा आपत्ति जनाइएको हो । एसोसिएसनका कावा अध्यक्ष किशोर सिंह र सङ्घका अध्यक्ष मुकेश गुप्ताले नगरपालिका क्षेत्रमा आफ्नो लगानीमा निर्माण गरेको सडकमा कर उठाउन पाउने स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, नियमावलीमा व्यवस्था भए अनुरूप ठेक्का दिने काम भएकोमा सरकारको शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी जिम्मेवार निकायबाट कर सड्ढलनमा बाधा पुर्‍याउनु आपत्तिजनक भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराइएको छ । ज्ञापनमा प्रजि
आर्मीलाई हराउँदै पुलिस फाइनलमा
प्रस, पथलैया, ११ साउन/ नेपाल पुलिस क्लब चौधौं राष्ट्रिय एनसेल महिला फूटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । सिमरा र·शालामा बिहीवार भएको सेमिफाइनल खेलमा आर्मीलाई २–० ले पराजित गर्दै पुलिस फाइनलमा प्रवेश गरेको हो । अत्यन्त प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा पुलिसलाई जित दिलाउनका लागि कप्तान चन्द्रा भण्डारी र निरू थापाले समान एक–एक गोल गरेका थिए । खेलमा दुवै टिमले गोल गर्ने अवसर गुमाएपछि पहिलो हाफ बराबरीमा सकिएको थियो । रोमाञ्चक खेलको दोस्रो हाफमा पुलिसकी चन्द्राले गोल गर्दै टिमलाई अग्रता दिलाएकी थिइन् । उनले खेलको ५१ औ मिनेटमा गोल गरेकी थिइन् । खेलमा अग्रता लिएपछि आक्रामक खेल खेल्दै पुलिसले ८९ औ मिनेटमा दोस्रो गोल गरेको थियो । पुलिसको गोल अन्तर बढाउने क्रममा निरू थापाले बललाई जाली चुमाएकी थिइन् । खेलको दोस्रो हाफमा केही अवसर बनाएको आर्मीले खेलको ६७ औ मिनेटमा गोल फर्काएपनि रेफ्रीले उक्त गोललाई फल घोषित गरेका थिए । कृष्णा खत्रीले गोल गरेपनि रेफ्रीले फल दिएपछि आर्मी स्तब्ध बन्न पुगेको थियो । आर्मीले खेलको समाप्तिपछि रेफ्रीको उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको थियो । प्रतिय
स्पेनको गहिरिंदो आर्थिक सड्ढट
- विश्वराज अधिकारी विश्व अर्थ व्यवस्थामा सुधारको सड्ढेत देखिनुको साटो आर्थिक समस्या झन्झन् गहिरिने हो कि भन्ने भय उत्पन्न हुन थालेको छ । विश्व अर्थ व्यवस्थालाई युरोपको अर्थ व्यवस्थाले निकै प्रभाव पार्ने गर्दछ । अर्कोतिर युरोपको आर्थिक समस्यामा सुधार आउन सकिरहेको छैन । युरोपको आर्थिक अवस्थाले विश्व अर्थ व्यवस्थालाई धेरै प्रभाव पार्ने भएकोले विश्व अर्थ व्यवस्थामा अझै सड्ढट आउने हो कि भनी शड्ढा गरिएको हो । युरोपका राष्ट्रहरू– पोर्चुगल, ग्रीस, आयरल्यान्ड, इटली पहिलेदेखि नै समस्यग्रस्त थिए, अब स्पेन पनि गम्भीर आर्थिक समस्याको भुमरिमा पर्ने हो कि भन्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । स्पेनले समस्याको समाधान उचित किसिमले गर्न नसकेमा त्यहाँ बेरोजगारी र गरिबी झनै बढ्दै जाने देखिन्छ । स्पेनको खराब आर्थिक अवस्थाको प्रभाव युरोप हुँदै विश्व अर्थ व्यवस्थामा समेत पर्नेछ । स्पेन युरो जोनभित्र पर्दछ । युरो जोनभित्र पर्ने युरोपका १७ राष्ट्रहरूमध्ये स्पेन चौथो ठूलो अर्थतन्त्र हो । यसैगरी विश्वको बार्‍हौं ठूलो अर्थतन्त्र हो भने युरोपको पाँचौं । तर अहिले स्पेनमा आर्थिक सड्ढट गहिरिएको छ । स्पेनका प्रान्त
लै·िक उत्तरदायी र समावेशी बजेट
- शीतलप्रसाद महतो समावेशी आर्थिक विकासको सुनिश्चितता प्रदान गर्नका लागि लै·िक उत्तरदायी तथा समावेशी बजेटको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । लै·िक उत्तरदायी बजेट भनेको महिला र पुरुषका लागि छुट्टाछुट्टै बजेट भने होइन । यसले महिलाका लागि कुल बजेटको ५० प्रतिशत र पुरुषका लागि ५० प्रतिशतको हिस्सा खोज्दैछ भन्ने पनि होइन । यथार्थमा महिला र पुरुषको संग्लनताबाट नै संसार बनेको हुन्छ । तर महिला र पुरुषमा फरक–फरक आवश्यकता र प्राथमिकता हुने भएकाले त्यसको समानुपातिक सम्बोधनका लागि तथा सार्वजनिक साधन पुगेको अनुमान, प्राप्ति, वितरण र उपभोगलाई प्रभावकारी तुल्याउने सन्दर्भमा लै·िक उत्तरदायी तथा समावेशी बजेटको भूमिका प्रभावकारी हुन्छ । लै·िक मूल प्रवाहीकरण र समावेशीका लागि अवलम्बन गरिने कार्य नै लै·िक उत्तरदायी तथा समावेशी पद्धति हो । विशेषत: लै·िक उत्तरदायी बजेटले पारदर्शिता, जवाफदेहिता, लगनशीलता र इमानदारिता संवद्र्धन गर्ने, महिला र पुरुषबीच उत्पादनशील साधन–स्रोतको समतामूलक वितरणद्वारा गरिबी उन्मूलनको अभियानलाई गति दिने, सीमित साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने तथा सामाजिक न्याय अभिवृद्धि गर्ने का